मुख्य समाचार – Page 539 – JanaSanchar.com
सरकारलाई लेखा समितिले दियो यस्तो कडा निर्देशन
काठमाडौं, २४ माघ । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति चयन भएपछि सोमबार पहिलो पटक बसेको बैठकले राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने काम नगर्न भनेको हो । तोकिएको समयमा खर्च नगर्ने निकायलाई समेत बजेट थप गर्ने गरिएकाले यस्ता कार्य..
सार्वजनिक यातायातमा भाडा एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं, २४ माघ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा घटाएको एक वर्ष बित्दा पनि भाडादर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले विसं २०७२ माघ २४ गते सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुरुप भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको एक वर्ष बित्दा पनि विभागले अनुगमन नगरेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको यात्रुको..
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोमा फेरि विवाद
बेलाबखत आन्तरिक विवादमा रुमलिँदै आएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) भित्र नयाँ विवाद देखा परेको छ । विशेष गरी स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा बन्न लागेको गोरखा स्मारकको विषयलाई लिएर गेसोभित्र पछिल्लो विवाद सतहमा आएको हो l स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा निर्माणाधीन गोर्खा स्मारक पार्क निर्माणमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ ‘गेसो’को वर्तमान..
एसएसपी खत्रीलाई ४ दिन थुन्न अदालतको आदेश
सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका एसएसपी श्यामबहादुर खत्रीलाई जिल्ला अदालत काठमााडौंले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले म्याद दिएको छ । अदालतले सोमबार प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि समय दिएको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीआइबी)को नियन्त्रणमा रहेका खत्रीलाई म्याद थपका लागि सोमबार अदालत लगिएको हो । सुन..
निर्वाचन नभए संविधान असफल हुन्छ : महामन्त्री डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.शंशाक कोइरालाले निर्वाचन नभए संविधान असफल हुने बताए । रफत सञ्चार क्लवमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री डा. कोइरालाले सरकारले ०७४ माघ ७ गते भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्न असफल नसके संविधान पूर्ण रुपमा असफल हुने बताए । सरकारले निर्णय गरेबमोजिम जेठ १० गते भित्र कुनै पनि हालतमा स्थानीय निकायको..
विप्लव माओवादीका २ नेता पक्राउ, तत्काल रिहा नगरिए संघर्षमा उत्रिने कर्णाली ब्युरोको चेतावनी
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव माओवादी दैलेखका २ जना जिल्ला सदस्यलाइ सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महाधिवेशन प्रचार प्रसारमा रहेका माओवादी जिल्ला सदस्य दोय भिम बहादुर नेपाली र चन्द्र बहादुर बुढालाइ पक्रउ गरेको हो । त्यस्तै आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको प्रती माओवादी कर्णाली ब्यूरोले कडा आपत्ति जनाएको छ । माओवादी कर्णाली ब्युरोका..
फ्रिडम फोरमले साठीवटा क्याम्पससँग एकसाथ सूचना माग्यो
काठमाडौँ, ४ माघ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका मुलुकभरका ६० वटा आङ्गिक क्याम्पसमा एकैपटक सूचना माग गरिएको छ । सूचनाको हकका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमको अगुवाइमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकभरका ६० क्याम्पसबाट सूचना माग गरिएको हो । फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल र सूचनाको हकका..
काठमाडौं,२४ माघ । निर्वाचन आयोेगको प्रस्ताव अनुसार सरकारले जेठ १ गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । तत्काल चुनावको मिति घोषणा नभएपनि जेठ १ गते चुनाव गर्नेगरी तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । आयोगले आइतबार जेठ १ र १९ गते दुई चरणमा चुनाव गर्नेगरी मिति तोक्न र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारसँग..